KUFEZIWE! IChiefs idlulele phambili kwiChampions League - Impempe
KUFEZIWE! IChiefs idlulele phambili kwiChampions League
Ikhombise ubuqhawe iKaizer Chiefs ibuya seyilandela ngemuva kuze kube kabili ukuze idlale ngokulingana ngo 2-2 neHoroya emdlalwe weCaf Champions League eGuinea ngoMgqibelo ebusuku.
Umdlalo ubusinda kusukela uqala kodwa abafana bakaGavin Hunt balwa kwaze kwagcina kulungile njengoba beqede besendaweni yesibili kuGroup C, okubafaka emzuliswaneni womkhumulajezi.
Amakhosi aqale edonsa nzima futhi acishe alahlekelwa ngu-Erick Mathoho kusaphele imizuzu elishumi kuphela njengoba engqubuzane kabuhlungu nesitobha seHoroya, kwadingeka abhandishwe ikhanda. Nokho ubuyile waqhubeka.
IHoroya iqalile ukubonisa ukuthi yiyo esekhaya, yahlasela iphindelela emapalini eChiefs. Buka nje ngoba ngomzuzu ka-15 uBarry Gnagna ugeje kancane ethi ulingqofela enethini ibhola kodwa laphuma phezulu.
U-Itumeleng Khune usebenzile evimba ibhola elibi ngomzuzu ka-26. Ngomzuzu ka-32, uGnagna ubesebuyile futhi wathola ithuba elihle, kodwa wathatha isikhathi sakhe engakhahleli waze wagcina eliphuciwe ibhola.
Ngemuva kwalokho iHoroya beyisikhempe engxenyeni yeChiefs, ibuya iphindelela emapalini kaKhune kodwa yehluleke ukulibeka enethini.
Nokho bekucaca ukuthi izogcina iyitholile intuba yokungena. Nempela kwenzekile sekubalwa amanenjana kuyiwe ekhefini, uGnagna walingqofela enethini ibhola kade kuyikhona.
Nangesiwombe sesibili bekuseyiHoroya ephethe umdlalo, ilokhu ihlokoloza emapalini eChiefs ifuna elesibili ebelizoyigoba inkani iChiefs.
Abe nenhlanhla Amakhosi unompempe engayibizi iphenathi ngemuva kokuthi uDaniel Cardoso ewise uBoniface Haba ngaphakathi ebhokisini langakubo.
Nokho unompempe uwenze kahle umsebenzi wakhe ebekela iChiefs iphenathi ngomzuzu ka-65 kulandela ukuthi isitobha seHoroya silibambe ngesandla ibhola sizama ukumaka uDumisani Zuma ongene kwacaca.
UCardoso ube eselibeka enethini kwaba ngu 1-1, kodwa kuthe kusukela lapho iHoroya yakuphinda lokho uFode Camara elingqofela enethini ibhola kade kuyikhona.
Kodwa ngomzuzu ka-75, Amakhosi aphimde alinganise, uZuma ebekela uKhama Billiat elihle ibhola ngaphakathi ebhokisini leHoroya, akangabe esalenza iphutha walinamathisela enethini.
Izamile iHoroya ukuthola elinye igoli kodwa yafica uKhune esebuyele kulo wakudala owayebamba ngisho impukane. Lo mphumela ubeke Amakhosi endaweni yesibili, okuyifaka emzuliswaneni olandelayo.
Previous Previous post: Iphendulwe iminqolo iGalaxy ishayelwa ekhaya
Next Next post: Useyayibona inyamazane abayihubha kwiChampions League oweChiefs